BrainCoin စျေး - အွန်လိုင်း BRAIN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BrainCoin (BRAIN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BrainCoin (BRAIN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BrainCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
BRAIN – BrainCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BrainCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BrainCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BrainCoinBRAIN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000135BrainCoinBRAIN သို့ ယူရိုEUR€0.000114BrainCoinBRAIN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000103BrainCoinBRAIN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000122BrainCoinBRAIN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0012BrainCoinBRAIN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000848BrainCoinBRAIN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00298BrainCoinBRAIN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000501BrainCoinBRAIN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000178BrainCoinBRAIN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000188BrainCoinBRAIN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00299BrainCoinBRAIN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00104BrainCoinBRAIN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000722BrainCoinBRAIN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0101BrainCoinBRAIN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0227BrainCoinBRAIN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000185BrainCoinBRAIN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000206BrainCoinBRAIN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00418BrainCoinBRAIN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000935BrainCoinBRAIN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0144BrainCoinBRAIN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.16BrainCoinBRAIN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0521BrainCoinBRAIN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.00983BrainCoinBRAIN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0037
BrainCoinBRAIN သို့ BitcoinBTC0.00000001 BrainCoinBRAIN သို့ EthereumETH0.0000004 BrainCoinBRAIN သို့ LitecoinLTC0.000002 BrainCoinBRAIN သို့ DigitalCashDASH0.000001 BrainCoinBRAIN သို့ MoneroXMR0.000002 BrainCoinBRAIN သို့ NxtNXT0.0105 BrainCoinBRAIN သို့ Ethereum ClassicETC0.00002 BrainCoinBRAIN သို့ DogecoinDOGE0.0388 BrainCoinBRAIN သို့ ZCashZEC0.000002 BrainCoinBRAIN သို့ BitsharesBTS0.00415 BrainCoinBRAIN သို့ DigiByteDGB0.00431 BrainCoinBRAIN သို့ RippleXRP0.000478 BrainCoinBRAIN သို့ BitcoinDarkBTCD0.000005 BrainCoinBRAIN သို့ PeerCoinPPC0.000446 BrainCoinBRAIN သို့ CraigsCoinCRAIG0.0613 BrainCoinBRAIN သို့ BitstakeXBS0.00574 BrainCoinBRAIN သို့ PayCoinXPY0.00235 BrainCoinBRAIN သို့ ProsperCoinPRC0.0169 BrainCoinBRAIN သို့ YbCoinYBC0.00000007 BrainCoinBRAIN သို့ DarkKushDANK0.0432 BrainCoinBRAIN သို့ GiveCoinGIVE0.291 BrainCoinBRAIN သို့ KoboCoinKOBO0.0307 BrainCoinBRAIN သို့ DarkTokenDT0.000124 BrainCoinBRAIN သို့ CETUS CoinCETI0.389
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 05:15:01 +0000.